Zambia: Fihainoana Ny Fifandraisana Findain’Ilay Minisitry ny Raharaham-Bahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2019 2:41 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2013)
Voan'ny tsindry avy amin'ny antokon'ny fitondràna Patriotic Front (PF) ny amin'ny tokony hametrahany fialàna ilay Minisitry ny Raharaham-bahiny Zambiana, Given Lubinda. Nampangain'ny komitin'ny fitsipi-pitondrantenan'ilay antoko ho nanaporitsaka vaovao taminà filazambaovao anaty aterneto izy. Nifototra tamin'ireo porofo izay voalaza fa nangonina tamin'ny alalan'ny fihainoana ny resaka nifanaovan‘ilay minisitra tanaty findainy izany fiampangana izany .
Nahasarika ny sain'ny maro ilay raharaha Lubinda, eny fa na ny mpampita vaovaom-panjakana aza, izay matetika mitatitra vaovao efa novaina tamin'ny fomba ofisialy. Lubinda dia mpikambana naharitra tao amin'ny PF sady mpanao lalàna ao amin'ny fari-piadidian'ny Kabwata, ao amin'ny faritr'i Lusaka.
Tamin'ny fotoana nahafaly kokoa, ny Minisitry Ny Raharaham-bahiny Given Lubinda, eo ankavia, miaraka amin'ny filoha Michael Sata. Sary natolotry ny Zambian Watchdog.
Kanefa ny tranokalan'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra, Zambian Watchdog no nitatitra fa ireo fihainoanan ny antso an-telefaona ireo dia nampiasaina tamin'ilay fakàna am-bavany an'i Lubinda nataon'ny kaomitin'ny fitsipi-pitondrantenan'ny antokon'ny fitondrana, mampiakatra ny ahiahy momba ny fampiasaina faobe io teknika io amin'ny olon-tsotra izay terena hanoratra ny karatra SIM amin'ny anarany, araka ny efa notaterinay.
Manoratra ny Zambian Watchdog hoe :
Ary takatry ny Watchdog tsara fa ny ampahan'ny tamin'ireo porofo nifandraisan'i Lubinda tamin'ireo antoko mpanohitra dia tamin'ny alàlan'ny fihainoana ny telefaonany, izay nampitombo ny ahiahy mikasika ny fiarovana ny tsirairay amin'io fanoratana ny karatra SIM amin'ny anaran'ny tena io.
Loharano akaiky avy ao amin'ilay fiakana am-bavany no nilaza fa ny resaka nifanaovan'i Lubinda no ampahany amin'ny porofo niampangana azy, na dia nisy teboka maromaro aza nentin'ny parlemantera Kabwata ho fiarovan-tenany sy ireo fifandraisana tamin'ireo antoko mpanohitra sasany.
Tsy nilaza mazava ny Zambian Watchdog hoe fikambanana ofisialy iza no nanao ilay fhainoana ny telefaona, saingy fantatra tsara ao Zambia fa ny sampam-pitsikilovana izay eo ambany fifehezan'ny Biraon'ny Filoha — eto dia ny an'ny filoha Michael Sata–, filoham-panjakana no sady mpitarika ny antokon'ny mpitondra, no manana fahefana hanao izany ary tafiditra amin'ny fampanoratana ireo karatra SIM amin'ny anaran'ny tsirairay.
Niteraka adihevitra be teny amin'ireo mpamaky tao amin'ilay tranokalam-baovao ilay resaka fihainoana telefaona
Manoratra ny mpamaky iray mitondra ny anaram-bosotra hoe Bob [tsy misy rohy manokana ireo fanehankevitra ao amin'ny Zambian Watchdog]:
Mazava izany izao fa ny solombavambahoaka rehetra, indrindra ny mpanao politika mpanohitra dia iharan'ny fihanoana telefaona avokoa. Mila fanamarinana mifanaraka kokoa amin'ny tokony ho izy aho manazava ny antony tsy maintsy hanoratako ny karatra SIM amin'ny anarako. Aleoko mampiasa telefaona tsy misy antsipiriany momba ahy miaraka amin'ireo mpanome tolotra raha izany. Alao sary an-tsaina hoe manoratra ny karatra SIM amin'ny anarany daholo ny olona rehetra ary misy angondrakitra feno tafajoro avy amin'izany. Avy eo dia hitety izany fotsiny ny hery eo amin'ny fitondrana sy / na hikaroka ny tahirin-tseraseran'ny olona araka izay tiany, ka hihaino izany. Araka izany, tsy heloka bevava ve moa ny fihainoana antso an-telefaona ataon'ny olona aty Zambia ?
Mpaneho hevitra iray hafa, The Observer, no manoratra hoe :
Tsy ny fanoratana ilay SIM amin'ny anaranao no olana. Raha ampiasaina amin'ny tsara, vao mainka manatsara ny fiarovana ny fanjakana aza izany. Alao sary an-tsaina hoe misy olona mividy karatra SIM mba handefasany fandrahonana anao ho faty, fampitandremana amin'ny baomba, na tsaho momba ny vadinao na koa ianao natory tany ho any ?
Ny olana dia ny fananantsika olona tsy manjary sy adala ao anatin'ny governemanta.
Ngana moa dia nampitandrina ny ho vokatry ny fihainoana ny telefaona :
TSY ARA-DALANA LOATRA AVY AMIN'NY GOVERNEMANTAN'NY PF NY FAMPIASANA NY TEKNOLOJIA ZAMBIANA HANARAHA-MASO NY MPONINA AO AMINY IZAY MANANA HEVITRA HAFA NOHO NY AN'I MICHAEL SATA. LOZA HO AN'NY FILAMINANTSIKA, RESAKA TSOTRA TOY IZAO NO METY HITARIKA ADY AN-TRANO
Ka noho izany, raha marina fa naraha-maso ny findain'i Lubinda, tokony ho mailo koa izany ny olom-pirenena rehetra izay takian'ny Zambia Information and Communication Technology Agency (ZICTA) izay sampan-draharaham-panjakana, mba hanoratra ny karatra SIM amin'ny anarany.